‘प्रचण्ड राष्ट्र कै समस्या हो, मैले सु’धार्न खोजे तर सकिन’ ! – Nepal Online Khabar
‘प्रचण्ड राष्ट्र कै समस्या हो, मैले सु’धार्न खोजे तर सकिन’ !
भाद्र १२, २०७८ शनिबार 346
केपी शर्मा ओलीले ऋषि धमलाको कार्यक्रममा कुरा गर्दै भने, “प्रचण्ड जी बि’ग्रेको मान्छे हो तर मैले सु’धार्न सक्छु भनेर पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए तर प्रचण्ड कहिल्यै नसुध्रिने रहेछन् । प्रचण्ड अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रको ठूलो समस्या हुन् र अहिलेको राजनीति अस्थिरता पनि उनकै कारण भएको हो ।”
प्रचण्डलाई सु’धार्न कोशिस गर्नु चाहिं गल्ती भयो किनकी प्रचण्ड सु’ध्रिने पात्र होइनन् ।”प्रचण्डको राजनीति अब चाडैं जनतालाई छर्लङ्ग हुने नेता ओलीले बताएका छन् । प्रचण्डले माधव नेपालसंग मिलेर नेकपा एमाले फुटाउनेदेखि एमालेको शक्ति कमजोर बनाउन कोशिस गरे तर जनताले साथ एमालेलाई दिने केपी ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
Prevबा’ढीले १५ सय घर डु’बानमा : पाँचको मृ’त्यु, चार बे’पत्ता !
Nextता’लिवानको तृ’ष्णा मेटाउन घर-घरबाट युवती उठाउँदै गु’लाम बनाउँदै !